Tusaha iibsashada ulaha USB -ga, darawallada adag ee SSD, iwm.
Kani waa qaybta ugu da'da yar windowspwoer.de, waxaan go'aansannay inaan u soo bandhigno qalab badan oo kala duwan hagaha qaybta. Waxaan bixinnaa darawalada adag ee SSD ugu fiican, usha USB, RAM, kormeerayaasha iyo waxyaabo kaloo badan.
Iyada oo lagu guulaystay dukaamaysiga internetka, dib -u -eegiddu waxay sidoo kale ka heleen internetka. Macaamiishu waxay qiimeeyaan badeecadaha ama adeegyada ama ...
Weerarada internetka ayaa sidoo kale halis geliya kombiyuutarada gaarka loo leeyahay
Markay timaaddo dambiyada internetka ee warbaahinta, waxay badanaa tilmaamaysaa shirkadaha ama hay'adaha dawladda. Weerarada ayaa ...
U adeegso Bing sidii niche suuqgeynta mashiinka raadinta
Markaad maqasho suuqgeynta mashiinka raadinta, waxa ugu horreeya ee aad ka fikirto waa Xayeysiisyada Google. Nidaamka xayeysiinta ee shirkadda weyn ee internetka waa hogaamiyaha suuqa iyo suuqgeynta internetka ...
Surfshark VPN ee Windows - Wuxuu ilaaliyaa asturnaantaada internetka
Surfshark VPN wuxuu suuqa ku jiray tan iyo 2017 wuxuuna caan ku noqday dadka isticmaala internetka. Adeegga VPN wuxuu taageeraa ...
16. Sebtembar 2021
Ku shaqaynta kombiyuutarada xafiiska - taasi waxay khuseysaa amniga
Nidaamyada IT -gu waa ilaha dhexe ee shirkad kasta maanta. Isla mar ahaantaana, weli waxaa jira khuraafaad ku xeeran su'aasha, ...
Xeerar muhiim u ah amniga IT
Nolosheena ayaa marba marka ka dambaysa si dhijitaal ah u noqonaysa mid dhijitaal ah. Dad tiro yar ayaa la socon kara isbeddelkan mustaqbalka fog. Gaar ahaan ...
5 Talooyin Iibsashada Kormeeraha - Sida Loo Qaado Go'aan Wanaagsan
Waxaa jira qaybo kala duwan oo muhiim ah marka la iibsanayo PC, tanina waa run gaar ahaan haddii ...
23. Juun 2021
Ku soo dhowow kooxda - sidan ayaad u salaamaysaa shaqaalaha cusub
Wadashaqaynta kooxdu waxay samaysaa shaqada riyada - taasi waa waxa ay dhahaan Si taas loo gaaro, waxaa muhiim ah in shaqaalaha ...
14. Juun 2021
Diyaarso warqadaha mushaharka - taasi waa muhiim
Haddii aad haysato Windows PC -gaaga oo aad maamusho shirkad ama aad shaqaalaysiiso dhowr qof, waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso ...
4. Juun 2021
Ku samee filimo daaqadaha - barnaamijyo kala duwan ayaa suurtogal ah
Nidaamka hawlgalka Windows weli waxaa laga heli karaa kombiyuutarro badan sidaas darteedna wuxuu saldhig u yahay barnaamijyo badan. Hay'ada Caafimaadka Aduunka…